Chaw Ei Thein: Grand Opening Night of Balance Art Gallery
Photo series of September Sweetness Installation on the outside wall
In the garden (Balance Art Gallery & Hmwe)
Ma May Nyein is taking photo
Posted by Chaw Ei Thein at 1:48 PM
Labels: at Balance Art Galllery
feeling your art work and
enjoying sticky rice there
Your are real artist !
Great job!!! Exhibition looks fantastic!
Cool creation! Great job.
ပေးချင်တဲ့ Message တွေ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းကတဆင့်ရ သလောက်ြိကုးစားယူသွားတယ်။
အားကောင်းမောင်းသန် တောထနေကြတဲ့မြစိမ်းရောင် တောအုပ် အရိုင်းတွေကို ရွှေဝါရောင်သံလွင်တစ်ခက်က ရင်ကော့စိန်ခေါ်သံ ကပဲ့တင်ထပ်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။
ဗုဒ္ဒရုပ်ပွားတော် နဲ့ အနောက်ခံကားချပ်ရှုခင်းကြီးကပေးထားတဲ့ installation နဲ့medium combination ကပေးချင်တဲ့ messageတွေ၊ သာသနာ့အလံတော်ကြီးက ရင်ထဲမှာစို့ စို့ နင့်နင့်ကြီးကျန်ခဲ့တယ်။ Textတွေ့ စကားလုံးတွေ၊အခြား medium တွေရောစပ်ပေါင်း ထည့်လာတဲ့ ပန်းချီတွေဒီဆယ်စုနှစ်ပိုင်းမှာ အားကောင်းလာခဲ့တယ်နော်။ လူတွေရဲ့ ရင်ထဲကို ပေးချင်တဲ့ messageတွေခံစားမှုတွေ ကိုပိုအားကောင်းစွာပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံ လာကြတယ်။ ဒါတွေဒီပွဲမှာတွေ့ လိုက်ရတယ်။ ပြကွက်တစ်ခုလုံး မရမ်းတွေ၊ အနီတွေ၊ အမည်းတွေ အားပြိုင်နေလိုက်တာ..
ဒီပွဲကိုလူကိုယ်တိုင်လာကြည့်ဖြစ်ရင်တော့ ကျွန်တော်ထွက်ပေါက်မဲ့ကျဆုံးမလား၊ ထွက်ပေါက်ကို အရရှာယူမလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေရတော့မယ်ထင်တာပဲ။
ပွဲမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေကပဲတဆင့်ခံစားရလို့ အားမရပါ။ အပေါ်ကခံစားဘာသာပြန်သွားတဲ့ကွန်မန့် တွေကလဲမချောအိ ပေးချင်တဲ့ message တွေ တိုက်ရိုက်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှပါ။ ပန်းချီ နဲ့ အင်စတောလေးရှင်းတွေ အနူပညာတွေဆိုတာကလဲ ကြည့်တဲ့သူက ကိုယ်ဘာသာ ဘာသာပြန်ခွင့်လဲရှိနေသေးတာကိုး။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်..
Dear Chaw, I am trying to get in touch with you. I amaFrench journalist based in Asia and I am going to Yangon inafew weeks forareport about Burmese artists. Can I contact you? I did not find your email address in the Internet. Please use this safe email box: sudouestenfolie@yahoo.fr
Thanksalot. Jerry